सचिनले आफ्नै जन्मदिने आमालाई भेटेपछि रुवाबासी, मेरो छोरा भन्दै आमाले सुम सुमाउदै अगालो हाल्दै रुँदा सबै राए, सचिनले म अब आफ्नै ममिसँग नै जान्छु भन्दै गालामा यसरी चुम्बन गरिरहे – Gazabkonews
सचिनले आफ्नै जन्मदिने आमालाई भेटेपछि रुवाबासी, मेरो छोरा भन्दै आमाले सुम सुमाउदै अगालो हाल्दै रुँदा सबै राए, सचिनले म अब आफ्नै ममिसँग नै जान्छु भन्दै गालामा यसरी चुम्बन गरिरहे
सचिनले जन्मदिने आमालाई भेटेपछी रुवाबासी ! समाल्नै गाह्रो भयो, अब सचिन ठुलि मम्मिसङै जाने पक्का ? (भिडियो सहित)
चर्चित बाल गायक सचिन परियारको उनकी आमालाई भेट्ने धो’का पुरा भएको छ । हिँजो बाग्लुङबाट काठमाण्डौ गएकी उनले हिँजो नै सचिनलाई भेटन खोजेकी थिईन् । मिडियाकर्मीहरुको सहयोगमा उनलाई काठमाण्डौ पुर्याईएको छ ।
आफ्नै जन्मदिएको छोराको माया किन नहुँदोहो । कति वर्ष देखि पी’डा लुकाएर बसेकी उनकी आमाले सचिनलाई पहिलो पल्ट भेट्दा मन था’म्न सकिनन् डाँ”को छो’रेर रो’ईन् । एकछिन त्यहाँ रहेका सम्पूणर् मानिसहरु चु’पचा’प रहे । कतिका आँ’खा र’सा’ए । कतिले मन था”म्न सकेनन् ।
यता आँ’सु नै था”म्न नसकेपछि सचिनले भने आमालाई एउटा गीत गाएर फ’का’एका छन् । मेरी आमालाई भेटेपछि आ’ईल’भयू भन्न मन लाग्छ भन्ने गीत गाएर फ’का’एका थिए । त्यस्तै उनले आफुसगं भएको पैसा आमालाई दिएर फ’का’एका छन्